Ny singa azo raisina teo amin’ny minisitry ny fahasalamana mifampita fahefana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nivoaka ny 20 aogositra teo ny didim-panjakana noraisin’ny filoham-pirenena nanova ny mpikambana sasany ao anatin’ny Governemanta. Olona efatra vaovao no voatendry ao anatin’izany didim-panjakana izany. Vita ny famindram-pahefana teo amin’ny ministry ny fahasalamana.
Notontosaina ny 21 aogositra tamin’ny 11 ora antoandro ny famindram-pahefana sy fitantanana ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka teo amin’ny minisitry Ahmad Ahmad ary ny vaovao voatendry Rakotovao Hanitrala Jean Louis.
Ny fanesorana ny ministra Ahmad Ahmad no tena azo lazaina fa fanovana tao anatin’izao fanendrena vaovao izao. Ny minisitry ny mponina efa tokony nametra-pialana efa hatrany ny ela. Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena efa ela no nandrasana ny fanendrena.
Mikasika ny minisitry ny fahasalamana manokana dia azo lazaina fa nesorina tsy ho mpikambana ao anatin’ny governemantan’i Ntsay Christian ny minisitra Ahmad Ahmad.
Moa tsy nahavita ny asany izy ?
Raha ny famaritana ny fomba fiasa hatrany amboalohany dia refesina ny asan’ny mpikambana tsirairay rehefa hanao fanovana. Raha izay fomba fisainana sy fomba nambara mazava izay dia tsy nahavitany asa nampiandraiketina azy ny minisitra Ahmad Ahmad. Inona io asa tsy vitany io ? Ny ady amin’ny valanaretina no noheverina avy ety ivelany fa asa mankadiry voalohany ho azy. Ka tsy vita ve ny ady ? Moa tsy efa andalana mandresy ny valaretina ny firenena sy ny fanjakana ? Sa…
Efa resy ny valanaretina raha ny fandraisam-pitenenana nataon’ny ministra mpandimby toerana tamin’ny fifamindram-pahefana. Efa tsy tao anatin’ny laharam-pahamehana intsony io ady io. Efa fananganana fotodrafitrasa hatrany amin’ny kaominina sasany no lohalaharana ankehitriny ary fampitaovana ireny fotodrafitrasa ireny ihany koa. Raha izany… moa ve isan’ny asa nampanaovina ny ministra ahmad Ahmad io fotodrafitrasa io fa izy no tsy nety fa naleony niatrika ny valanaretina ? toa manamafy izany ny lahateny fohy teo amin’ny famindram-pahefana fa tena ilay taratasy nataon’ny ministra Ahmad Ahmad no tena tsy zakan’ny filoham-pirenena ary nanesorana azy.
Isan'ny manaitra koa ny tsy fandrenesana ny teny fohy mikasika ny olona hampihodina sy hampandeha tsara ireny fotodrafitrasa hohapetraka manerana ny Nosy ireny.
Isan’ny zava-dehibe koa dia vao niala ny ministry ny fahasalamana dia natsahatra ilay filankevitry ny minisitra ifandraisan-davitra na visioconférence. Fifandrifiana ihany angamba izany.
Ny Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis, minisitry ny fahasalamam-bahoaka vaovao dia mpandidy momba ny tratra izy. Efa nitana andraikitra samihafa teo anivon’ny CHU HJRA, sy teo anivon’ny ministera. Zanaka antrano mahalala ny ativilany izany.
Fa apetraka ny fanontaniana : ho minisitra mpandidy tratra mpandraharaha izany no ho hitantsika manomboka eto ?